Astra Make-up Ny Fanaovana Marika Indray Ny Orinasa - Famolavolana
Ny Fanaovana Marika Indray Ny Orinasa
Ny Fanaovana Marika Indray Ny Orinasa Ny herin'ny marika dia tsy eo amin'ny fahaizany sy ny fahitany ihany, fa eo amin'ny fifandraisana ihany koa. Lisitra ampiasaina mora feno sary sary; tranokala iray manentana sy manintona varotra izay manome tolotra an-tserasera sy fijerena ireo vokatra marika. Namolavola fiteny vazaha ihany koa izahay tamin'ny fanehoana ny fahatsapana marika miaraka amin'ny endrika lamaody sy andalana fifandraisana vaovao ao amin'ny media sosialy, nametraka fifanakalozan-kevitra eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa.
Anaran'ny tetikasa : Astra Make-up, Anaran'ny mpamorona : Paul Robb, Anaran'ny mpanjifa : Salt & Pepper.
Ny Fanaovana Marika Indray Ny Orinasa Paul Robb Astra Make-up